isevisi yesevisi - Ukuhlolwa kwensizakalo yaseChina, Umbiko
Siyini isimemezelo se-GOST-R? IGOST-R Declaration of Conformity yidokhumende yesimemezelo yokufakazela ukuthi izimpahla ziyalandelwa nemithetho yokuphepha yaseRussia. Ngenkathi i-Law of Product and Certification Service ikhishwa yiRussia Federation ngo-1995, uhlelo oluyimpoqo lokuqinisekiswa kwemikhiqizo lwaqala ukusebenza eRussia. Kudinga ukuthi yonke imikhiqizo edayiswa emakethe yaseRussia iphrintwe ngophawu oluyimpoqo lwesitifiketi se-GOST. Njengenye yezindlela zokugunyazwa kokuhambisana nesitifiketi, iGost-R Declaration of Conformi ...
HatYini i-cTUVus & ETL CERTIFICATION? I-OSHA (i-Occupational Safety and Health Administration), ehlangene ne-US DOL (Department of Labour), ifuna ukuthi yonke imikhiqizo ezosetshenziswa emsebenzini kumele ihlolwe futhi iqinisekiswe yi-NRTL ngaphambi kokuba ithengiswe emakethe. Amazinga wokuhlola asebenzayo afaka phakathi amazinga e-American National Standards Institute (ANSI); Izindinganiso zeAmerican Society for Testing Material (ASTM), amazinga e-Underwriter Laboratory (UL), nenhlangano yokuqashelwa ngokubambisana kwefekthri ...
Kuyini UKUBHALISWA KWE-WERCSmart? I-WERCSmart isifinyezo se-World Environmental Regulatory Compliance Standard. I-WERCSmart yinkampani egcina imininingwane yokubhaliswa kwemikhiqizo eyenziwe yinkampani yaseMelika ebizwa ngeThe Wercs. Ihlose ukuhlinzeka ngeplatifomu yokuqondisa ukuphepha komkhiqizo ezitolo ezinkulu ezise-US naseCanada, nokwenza ukuthenga umkhiqizo kube lula. Ezinhlelweni zokuthengisa, ukuthutha, ukugcina nokulahla imikhiqizo phakathi kwabathengisi nabamukeli ababhalisiwe, imikhiqizo izobhekana ngokuya ngokubambisana ...
Siyini isitifiketi se-CE? Uphawu lwe-CE "yipasipoti" yemikhiqizo yokungena emakethe ye-EU kanye nemakethe yamazwe e-EU Free Trade Association. Noma imiphi imikhiqizo ebekiwe (ebandakanyeka esiyalweni sendlela entsha), noma ngabe yenziwe ngaphandle kwe-EU noma emazweni angamalungu e-EU, ukuze ijikeleze ngokukhululeka emakethe ye-EU, kufanele ithobele izidingo zezinkomba kanye namazinga ahambisanayo afanele ngaphambi kokuba ibekwe emakethe ye-EU, bese unamathisela uphawu lwe-CE. Lokhu yi...
▍ Amazinga wokubuka konke wokuqinisekisa kanye ne-Certification Document Test standard: GB31241-2014: Amaseli e-lithium ion namabhethri asetshenziswa kwimishini ephathekayo ye-elektroniki document Izimfuneko zokuphepha Idokhumenti yesitifiketi: I-CQC11-464112-2015: Imithetho Yesitifiketi Sokuphepha Sebhethri kanye neBattery Pack Yezokuphepha Kwamadivayisi we-elekthronikhi angemuva kanye Idethi yokuqalisa 1. GB31241-2014 yashicilelwa ngoDisemba 5, 2014; 2. I-GB31241-2014 yasetshenziswa ngamandla ngo-Agasti 1, 2015.; 3. Ngo-Okthoba 1 ...
Kuyini i-ANATEL Homologation? I-ANATEL iyisifushaniso se-Agencia Nacional de Telecomunicacoes okuyigunya likahulumeni waseBrazil lokuqinisekisa imikhiqizo yokuxhumana eqinisekisiwe neyokuzithandela. Izinqubo zayo zokuvunywa nokuhambisana ziyafana kokubili imikhiqizo yasekhaya yaseBrazil nakwamanye amazwe. Uma imikhiqizo isebenza kwisitifikedi esiyimpoqo, umphumela wokuhlola nombiko kufanele kuhambisane nemithetho nemithetho ebekiwe njengoba kucelwe yi-ANATEL. Isitifiketi somkhiqizo ...
Siyini isitifiketi se-TISI? I-TISI ifushane nge-Thai Industrial Standards Institute, esebenzisana noMnyango Wezimboni waseThailand. I-TISI inesibopho sokwakha amazinga asekhaya kanye nokubamba iqhaza ekwakhiweni kwamazinga wamazwe omhlaba kanye nokuqondisa imikhiqizo kanye nenqubo yokuhlola efanelekile ukuqinisekisa ukuhambisana okujwayelekile nokwamukelwa. I-TISI yinhlangano egunyaziwe kahulumeni egunyaza isitifiketi esiyimpoqo eThailand. Iphinde ibhekele ...
Siyini isitifiketi se-PSE? I-PSE (Ukuphepha Komkhiqizo Kokusebenza Kukagesi Nento) uhlelo oluyimpoqo lwesitifiketi eJapan. Kubizwa nangokuthi 'Ukuhlolwa Kokuhambisana' okuyisistimu yokungena emakethe ephoqelekile yezinto ezisebenza ngogesi. Isitifiketi se-PSE sakhiwe izingxenye ezimbili: i-EMC nokuphepha komkhiqizo futhi futhi kuwumthethonqubo obalulekile womthetho wezokuphepha waseJapan wezinto ezisebenza ngogesi. StandardIsitifiketi Esijwayelekile samabhethri e-lithium Ukuhunyushwa kwe-METI Ordinance ye-technical Requ ...
Yini i-KC? Kusukela ngomhlaka 25 Aug., 2008 ， Korea Ministry of Knowledge Economy (MKE) imemezele ukuthi iNational Standard Committee izobamba umaki omusha wesitifiketi sobumbano lukazwelonke - obizwa nge-KC mark esikhundleni seSitifiketi saseKorea phakathi kukaJulayi 2009 noDisemba 2010. Izinto zikagesi uhlelo lokuqinisekisa ukuphepha (i-KC Certification) uhlelo oluyimpoqo futhi oluzilawulayo lokuvikela ukuphepha ngokwe-Electrical Appliances Safety Control Act, uhlelo oluqinisekisa ukuphepha ...
Isingeniso se-MIBSMI Isingeniso sesitifiketi se-BSMI BSMI sifushane nge-Bureau of Standards, Metrology and Inspection, esungulwe ngo-1930 futhi sabizwa ngeNational Metrology Bureau ngaleso sikhathi. Yinhlangano enkulu yokuhlola eRepublic of China ephethe umsebenzi emazingeni kazwelonke, imetrology kanye nokuhlolwa kwemikhiqizo njll. Izindinganiso zokuhlola izinto zikagesi eTaiwan zenziwa yi-BSMI. Imikhiqizo igunyaziwe ukusebenzisa ukumaka kwe-BSMI ngezimo eziku-c ...
“Siyini isitifiketi se-CB CB IECEE CB wuhlelo lokuqala lwangempela lwamazwe omhlaba lokuqashelwa ngokufanayo kwemibiko yokuhlolwa kokuphepha kwemishini kagesi. I-NCB (National Certification Body) ifinyelela esivumelwaneni samazwe amaningi, esenza abakhiqizi bathole isitifiketi sikazwelonke kwamanye amazwe angamalungu ngaphansi kohlelo lwe-CB ngesisekelo sokudlulisa esinye sezitifiketi ze-NCB. Isitifiketi se-CB yidokhumende elisemthethweni le-CB elikhishwe yi-NCB egunyaziwe, okumele lazise enye i-NCB ukuthi i-pr ...
HatYINI i-CTIA CERTIFICATION? I-CTIA, isifinyezo se-Cellular Telecommunications and Internet Association, yinhlangano yomphakathi engenzi nzuzo esungulwe ngo-1984 ngenhloso yokuqinisekisa inzuzo yabasebenza, abakhiqizi nabasebenzisi. I-CTIA inabo bonke opharetha base-US nabakhiqizi abavela kumasevisi omsakazo weselula, kanye nakumasevisi wedatha engenantambo nemikhiqizo. Isekelwa yi-FCC (Federal Communications Commission) neCongress, i-CTIA yenza ingxenye enkulu yemisebenzi nemisebenzi ...